China 100% Carbon fiber telescopic pole multifunction pole vagadziri uye vanotengesa | Lanbao
Iyi tsvimbo yeteresikopu inogadzirwa ne100% kabhoni fiber yekuomarara kwakanyanya, kurema kurema, kupfeka uye kuramba ngura. Iyo teresikopu tsvimbo ine zvikamu zvitatu, uye dhizaini dhizaini yekiyi inobvumira mushandisi kugadzirisa kureba zvakasununguka.
Aya mashoma kabhoni fiber anotambanudzwa matanda anotsvedza zvisingaite uye anogona kukiyiwa chero hurefu kubva pa110cm kusvika ku300cm, ayo akakodzera kune chero chishandiso panochengetwa compact uye kureba kwekuwedzera urefu. Aya matanda ari nyore kushandisa uye kutakura. Zvinogona kuwedzerwa kusvika pakureba kureba mumasekondi nekuburitsa kunze nekukiya yega yega telescoping chikamu.
Iyi teresikopu tsvimbo inogona kushandiswa mudzimba kuchenesa Windows uye nekuchenesa maseru ezuva. Tsvimbo inodzoserwa inopa mukana wekuchenesa uri kure. Ergonomic dhizaini inogadzira kure-kurekuchenesa zvakanyanya kuchengetedza-kwevashandi uye kwakachengeteka.
Tine timu yemainjiniya ane makore gumi nemashanu ezviitiko muacbon fiber indasitiri. Sefekitori yemakore gumi nemaviri, isu tinovimbisa yakasimba yekuongorora kwemhando yepamusoro, uye kana zvichidikanwa, isu tinogona zvakare kupa yechitatu-bato yemhando yekuongorora. Maitiro edu ese anoitwa zvakanyatsoenderana ne ISO 9001. Chikwata chedu chinodada nemabasa edu echokwadi uye anehunhu, uye anogara achiendesa yakanakisa sevhisi.
Iine yakajairwa kukiya koni uye yepasirese tambo, aya matanda anoshanda nezvose Unger zvakanamatira uye chero zvakabatanidzwa zvine tambo yepasirese. Kana iwe ukabatanidza squeegee, scrubber, brashi kana duster kune imwe yeteresikopu yedu matanda, unogona kuchenesa zvakaoma-kusvika-nzvimbo nekukurumidza uye nekuchengetedzeka pane kuchenesa nechibatiso chemuoko nemanera. Chero pese panenge paine kudiwa kwekuwedzera kusvika, kungave mukati kana kunze.
Pashure: 45Ft Mbeu dzakauchikwa zvinhu telescopic pole
Zvadaro: Carbon fiber chubhu nehurefu hwakasiyana, kureba kunogona kuvezwa
Telescopic Hwindo Kuchenesa Pole